Handroso eo alohanao Aho Ary handravona ny mikitoantoana – FJKM Ambavahadimitafo Handroso eo alohanao Aho Ary handravona ny mikitoantoana |
Handroso eo alohanao Aho Ary handravona ny mikitoantoana
Publié le 04 janvier 2021 à 10:01
Alahadin’ny epifania, voalohany amin’ny taona 2021; izay nihainoana ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Isaia 45; 1-8 : » 1Izao no lazain’i Jehovah amin’ny voahosony, dia Kyrosy, Izay notantanako tamin’ny tànany ankavanana, Mba handreseko firenena eo anoloanySy hamahako ny fehin-kibon’ny mpanjaka, Mba hamohako varavarana eo anoloany,Ka tsy hirindrina intsony ny vavahady : 2 Handroso eo alohanao Aho Ary handravona ny mikitoantoana Sy hanorotoro ny varavarana varahina Ary hanapatapaka ny hidy vy; 3Dia homeko anao ny rakitra ao amin’ny maizina Sy ny harena nafenina ao amin’ny mangingina, Mba hahafantaranao fa Izaho no Jehovah Izay miantso anao amin’ny anaranao, Dia Andriamanitry ny Isiraely. 4Noho ny amin’i Jakoba mpanompoko sy Isiraely voafidiko No niantsoako anao tamin’ny anaranao Sy nanomezako anarana malaza ho anao, na dia tsy nahafantatra Ahy aza hianao. 5Izaho no Jehovah, fa tsy misy hafa : Tsy misy Andriamanitra afa-tsy Izaho; Izaho efa nampisikina anao, kanefa tsy nahafantatra Ahy hianao, 6Mba hahafantarana hatrany amin’ny fiposahan’ny masoandro ka hatrany amin’ny filentehany Fa tsy misy afa-tsy Izaho : Izaho no Jehovah, fa tsy misy hafa, 7Dia Izaho Izay mamorona ny mazava sy mahary ny maizina, Manao ny fiadanana sy mahary ny loza; Izaho Jehovah no manao izany rehetra izany. 8Manateteva avy any ambony, ry lanitra, Ary aoka ny habakabaka hampilatsaka fahamarinana; Aoka ny tany hisokatra, Ary aoka ho vokatra avy amin’ireo ny famonjena; Ary aoka hitsimoka miaraka amin’izay ny fahamarinana.Izaho Jehovah no efa nahatonga izany «